Marketing ígwé ojii: Olee otú Mepụta ihe akpaaka na Automation Studio ibubata SMS kọntaktị n'ime MobileConnect | Martech Zone
Ụlọ ọrụ anyị mebere n'oge na-adịbeghị anya Salesforce Marketing Cloud maka onye ahịa nwere ihe dị ka ntinye iri na abụọ nwere mgbanwe mgbagwoju anya na iwu nkwurịta okwu. Na mgbọrọgwụ bụ a Zụọ ahịa Gụnyere isi na Fanye ndenye aha, ngwọta na-ewu ewu ma na-agbanwe agbanwe maka onyinye e-azụmahịa dabeere na ndenye aha.
Companylọ ọrụ ahụ nwere mmejuputa izi ozi mkpanaka ọhụrụ ebe ndị ahịa nwere ike ịhazi ndenye aha ha site na ozi ederede (SMS) na ha kwesịrị ịkwaga kọntaktị mkpanaka ha na MobileConnect. Akwụkwọ maka ibubata kọntaktị mkpanaka na MobileConnect bụ:
Mepụta nkọwa mbubata n'ime Onye nrụpụta kọntaktị.
Mepụta akpaaka n'ime Studio akpaaka.
Tinye ihe ọrụ mbubata na akpaaka.
Mgbe ị haziri ọrụ mbubata, họrọ nke ahụ nkọwa mbubata i kere.
Usoro na rụọ ọrụ akpaaka.
Nke ahụ dị ka usoro nzọụkwụ 5 dị mfe, nri? Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị mgbagwoju anya karịa, yabụ anyị ekpebiela idetu ya wee kesaa ya ebe a.
Usoro zuru ezu iji bubata kọntaktị ekwentị mkpanaaka ahịa ahịa gị na ekwentị mkpanaaka n'ime ekwentị mkpanaaka site na iji Studio Automation
Nzọụkwụ mbụ bụ ịmepụta nkọwa mbubata gị na Onye nrụpụta kọntaktị. Nke a bụ ndakpọ usoro iji mee nke a.
Mepụta nkọwa mbubata n'ime Onye nrụpụta kọntaktị site na ịpị Mepụta bọtịnụ dị na Kọntaktị Nrụpụta> Bubata.
họrọ List dika nke gi Ebe ebumnuche ụdị improt nke ịchọrọ ime.
họrọ Isi iyi mbubata. Anyị họọrọ ibubata site na nwa oge Mgbatị data nke ebugoro na data.
Elekere na Họrọ Ndepụta na Họrọ Ndepụta Gị (N'ọnọdụ anyị, kọntaktị niile - Mobile).
Kọntaktị ndị a abanyela ma anyị na-ebuga ha na MobileConnect, yabụ ị ga-ekwenyerịrị na nke a. Amụma ịbanye na asambodo.
Map kọlụm ndepụta mbubata gị (anyị kere nke Mgbatị data na kọntaktị ContactKey emebelarị).
Kpọọ ọrụ gị wee họrọ nke gị Koodu SMS na Okwu SMS.
Kwenye onye ọkachamara wee pịa Imecha iji chekwaa mmemme ọhụrụ gị. Jide n'aka na ịtinye adreesị ozi-e gị maka ịma ọkwa ka e wee mara gị ọkwa oge ọ bụla emechara mbubata ya na nsonaazụ ya.
A na-echekwa nkọwa mbubata gị ugbu a ma ị nwere ike itinye ya na Automation gị nke ị ga-emepụta Studio akpaaka.
Nzọụkwụ iji mepụta akpaaka n'ime Studio akpaaka adịghị anya nke ukwuu. ejila ihe Mmemme mbubata faịlụ. Chọpụta Ọrụ SMS ebe ị nwere ike tinye ọrụ site na iji Bubata ọrụ kọntaktị SMS.
Tinye ihe ọrụ mbubata na akpaaka site na ịhọrọ nkọwa mbubata ị mepụtara na nzọụkwụ 8 dị n'elu. Ị ga-mkpa ịgbasa nke SMS nchekwa ebe ị ga-ahụ gị nkọwa mbubata.
Usoro na rụọ ọrụ akpaaka. Mgbe akpaaka gị na-agba, a ga-ebubata kọntaktị mkpanaka gị, a ga-agwa gị na adreesị ozi-e na nzọụkwụ 8.
Ọ bụrụ na ị na-achọ enyemaka, egbula oge ịkpọtụrụ anyị na Highbridge. Anyị emeela ọtụtụ mmejuputa iwu na mbugharị site na nyiwe ahịa ekwentị ndị ọzọ gaa na Mobile Cloud.
Tags: studio akpaakaonye nrụpụta kọntaktịigodo kọntaktịmepụta nkọwa mbubatadata ndọtịeserese ubinkọwa mbubatambubata ndepụtambubata ndepụta mkpanaakambubata ndị debanyere aha mkpanakaọrụ kọntaktị mbubata SMSahia igwe ojiikọntaktị mkpanakamobile studionjikọ mkpanakaiwu nnabata nnabatantinyefanye ndenye ahandị ahịasfmcZụọ ahịa GụnyereSMSkoodu SMSsms isiokwuebumnuche ebumnuche
Manash nwere ahụmịhe karịa afọ 30 n'ịmepụta, nlegharị anya na ijikọ sọftụwia dị ka azịza ọrụ. Dị ka ngalaba-nchoputa na onye mmekọ na Highbridge, Manash na-ahụ maka ịlele na ịzụlite onye ahịa ha na nkà mmepe nke ime, na-ebute ụzọ na imejuputa ihe ngwọta akpaaka, na ịmepụta mgbagwoju anya na-ejikọta ọnụ.